inyukliya_iyingozi - Amanda.mobi isiXhosa
1,000 signatures iyafuneka
URhulumente uthethe banzi ngendlela azimisele ngayo ukuqinisekisa ukuba iNukliya iseluhlwini lokutsalwa kwamandla kagesi kweli lizwe nangona uMphathiswa wezimali esithi akukho mali eyaneleyo yokwenza oku, iSebe lezisingqongileyo (dept of Envirnmental Affairs) lisanda ukunikela ilungelo ku Eskom ukuba akhe indawo yokwenza ugesi osebenzisa iNukliya endaweni yase Duyfontein emntla weCape Flats eNtshona-Koloni. Ekhwankqisa ngakumbi kukuba uMphathiswa weZamandla, u-David Mahlobo unike isaziso sevekana ezimbalwa kuphela ukwenza udliwano-ndlebe ulunyazelekileyo ngoku ngokuthi abize indibano ekhethekile yokuxoxa ngezamandla. Ukuze ubani abe yinxalenye yale ndibano, kufuneka abe nesimemo sabucala esiya kwabo bachongwe leliSebe. Indibano elo luhlobo imelwe kukupapashwa, kumenywe u wonke-wonke kuba iNukliya isichaphazela sonke. Nokuba uMphathiswa wezamandla nabo bashishina ngeNukliya bayathanda okanye abathandi, iinkundla zomthetho zona zime kunye nathi ekutheni naluphi na uthethwa-thethwano okanye ingxoxo efanele yenzeke, kunyanzelekile ivulelwe wonke ubani osisakha-mzi kweli. Sizimisele ke ukuqinesekisa ukuba ilizwi labemi beli liyavakala.
Nangona kuyinyani ukuba sinemigodi yeUranium esinayo apha eMzantsi-Afrika, enokuthi isetyenziswe ukwenza amandla ka gesi kwizitishi zenukliya kweli, imitha ekhutshwa koku kwakunye nokungcola kwalendela yokwenza amandla ka gesi, kunobungozi obukwiqondo eliphezulu kwaye kwayayanyaniswa nentlobo-ntlobo zemihlaza nezinye izifo. 
Abemi base Chernobyl basaphila nezivubeko ezibangelwe yilemitha ye Nyukliya eyadala umonakalo nangoku
Intlekele eyenzekayo eyabangelwa kukutsalwa kwamandla eNyukliya e Chernobyl kwiminyaka engama - 31 eyadlulayo, yabeka impilo yamawaka-waka abantu apho emngciphekweni ngenxa yokuba bafunyanwa yilemitha inobungozi yatsho yaba bangela imihlaza, ungcoliseko lwamanzi, kwafa iintlanzi kunye nezityalo . Idolophana yase Prypiat yaphela ukusukela ngoko, akusekho nto ebonisa ukuba kwakhe kwaphilwa apho.
Abashishina ngeNyukliya bame ngento yokuba ubuchwephesha nokhuseleko sebuphuculiwe ukusukela ngoko kwenzeka isiganeko saseChernobyl kwaye isitishi samandla eNyukliya esiseKoeberg eNtshona-Koloni sivavanyiwe ukuqinisekisa ukuba iintlekele zeNyukliya ezi loluhlobo ezibangelwa yinyikima okanye ukugutyungelwa komhlaba ngamanzi (Tsunami)  azinakwenzeka njengase Fukushima eJapan ngo-2011. Kuko konke oku, imibutho efana noEarth Life Africa eRhawtini, baxhalabile ngeziztishi zakhiwayo zeNyukliya.
Kungenzekani ukuba singanengozi yeNyukliya apha eMzantsi-Afrika?
Abashishina ngeNyukliya nabo balawula olu shishino bathi umgama oli-16 km ukusuka kwisitishi samandla eNyukliya ubanzi ngokwaneleyo ukuba abantu bangaphuma ngokukhawulezileyo. Kodwa ooGqirha abajongene nentlalo-ntle yoluntu (Physicians for Social Responsibility), umbutho ose Amerika, awuvumelani noku. Ukholelwa ekubeni lo mgama ufanele kukuba ngama-80km ububanzi .
Nokuba eli nani lingaphikiswa, abantu abayakuthi bachaphazeleke koku bafanele kukumanyelwa. Ukuba singasebenzisa lo mgama wama-80 km oko kuyawuthetha ukuba abantu abahlala eCape Flats nasedolophini yase Kapa bangakwazi ukuphuma kwezindawo ngokukhawlezileyo ngaphambi kokuba bachaphazeleke ukuba kungehla ingozi kwezi zitishi zase Koeberg nase Duynefontein. iSebe lezisingqongileyo (dept of Envirnmental Affairs) lisanda kunikela ilungelo ku Eskom ukuba akhe indawo yokwenza ugesi osebenzisa iNukliya endaweni yase Duyfontein  kwaye bazimisele ukunika ilungelo lokwakhiwa kwesinye eThyspunt eMpuma-Koloni, indawo ukumgama ongaphezulu kancinci kuma-80 ukuphuma eBhayi. Nangona uSekela-Mphathiswa wezamandla uMnumzana Thembisile Majola ebeyinxalenye yengqungquthela okanye imbizo ngeNyukliya ebibanjelwe eJefferys Bay ngo Okthobha kulonyaka, eye yaxhasa isicelo seNyukliya eMpuma-Koloni, iSebe lezisingqongileyo (dept of Envirnmental Affairs) ayikasivumi eso sicelo . Ibunga lama Gamtkwa Khoisan nalo alihambisani nesi sicelo kule ndawo.
Siwakha njani amaziko eNyukliya ukuba asikwazi ngoku ukukhusela kwaye sibuyekeze abasebenzi abalinyazwe yimitha yeNyukliya?
Kude kubengoku, baliqela abemi beli abachikwe yimitha yeNyukliya kuquka nabo babesebenza ePelindaba. Uninzi lwabo lude lwabhubha, abo basasindileyo, baphila nezifo eziza ngamandla kwaye basalinde imbuyekezo ngoku.    
Amandla kagesi atsalwa elangeni ayingawo angcono?
Inkampani yeNyukliya ephantsi koRhulumente wase- Russia i-Rosatom, itshintshe isiqikelelo semisebenzi eyakudalwa lulwakhiwo lwendawo youkwenza iNyukliya ukusukela kuma- 15,000 ukwehla ukuyofika ku 5, 760. Kodwa imisebenzi eyenziwa ziziniki-mandla ezihlaziyekayo (Renewable Energy) ezifana nombane osuka elangeni (Solar) nowenziwa ngomoya uqikelelwa ukuba ukumyinge we-13 ngaphezulu kwalowo wenziwa ngowe Nyukliya . Uphando-nzulu ngabakwa- Institute for Sustainable Future lucebisa utshintshelo kwiiziniki-mandla ezivuselelekayo (Renewable Energy) omalwenziwe ngezigaba eMzantsi-Afrika, okuquka kulo ukujonga , ubuchwephesha beziniki- mandla abunakuveliswa apha ekhaya, obungavelisa amathuba emisebenzi amatsha angama-180, 000 ngomnyaka ka 2030 . Sezisi-Sibhozo(8) iinkampani zeziniki-mandla zabaNtsundu ezilungele nezilindele u-Eskom ukuba atyikitye izivumelwano ezibizwa ii-Independent Power Producers eziya kunika eziinkampani zabamnyama ithuba lokuvelisa lentlobo yombane . Kodwa, nokuba lenkqubo ye - Renewable energy Independent Power Producers (REIPP) ingaba neengxaki ezimbalwa kuneNyukliya, ayisosisombululo kuba iyinxalenye yezivumelwano eziqukunjelwa neenkampani zabucala ngomsebenzi obumelwe kukwenziwa nguRhulumente(privatisation) kubhatalwa eziNkampani izityhwentywe zemali ebifanele kukuya kunikezelo lwee-nkonzo zoluntu. Kungoko ke sima kunye nemibutho yamasebenzi  ememelela inkqubo ye REIPP evuleleke ngokulinganayo kubantu, kwaye ibeyeyoluntu ngokubanzi kunye nabasebenzi balondawo apho nayiphi inzuzo engqamene nokwenziwa kwalo mbane ziziniki-mandla ezivuselelekayo (Renewable Energy), iya ebantwini ingayi koo-hlohl’esakhe abanyolukele imali. Njengoko uMzantsi-Afrika uneenjongo zokuphelisa ukwenziwa kombane/gesi ngamalahle, kubalulekile ukuba oku makwenziwe ngendlela enobulungisa nengenasiphene. Xa ezi ziniki-mandla zihlaziyekayo (Renewable Energy) zinokuphathwa luLuntu, lungaqinisekisa ukuba abo baphelelwe ngumsebenzi ngenxa yokupheliswa kombane owenziwa ngamalahle, bayakwazi ukuqashwa basebenze.
Mphathiswa wezaMandla, Mnu. David Mahlobo, Eskom Interim Group Chief Executive Sean Maritz, Nersa CEO Chris Forlee, Mongameli weli Mnu. Jacob Zuma kunye noSekela Mongameli u-Mnu. Cyril Ramaphosa
Simemelela kuni Khabhinethi yeli, iSebe leza-Mandla kunye no Eskom ukuba ninanze izikhalo zethu zokuba nithathe isigqibo sokuyeka ukuthenga nantonina edibaniselene neNyukliya. Udliwano-ndlebe nendibano ekhethekile yokuxoxa ngezamandla (Energy Indaba) emiselwe umhla we-7 ukuya kwi-8 kule nyanga ka Disemba, iyakhwankqisa kwaye ayihambisani nokusatyelwa kwezimvo zoluntu ngokomgaqo-nkqubo weli . Kungoko ke thina siluluntu lweli, sizimisele ukuluqhuba olu dliwano-ndlebe noluntu ngokubanzi, sinazise ngoku kulandelayo;
iNyukliya ayibalulekanga, inobungozi, iyabiza, ayithobi xabiso lo mbane, ayinakho ukudala imisebenzi njenge ziniki-mandla ezivuselelekayo (renewables) kwaye ayinamandla okuguqula isimo soqoqosho.
Simemelela kuni ukuba nityikitye izivumelwano neeNkampani zabaNtsundu ezifake izicelo zokunikela ngamandla (REIPP proposals) ngokukhawulezileyo; kodwa kuko konke oku, simemelela ukuba nimisele umyinge ongama-5% oyakuba bubungakanani begalelo kumandla lawo ezinkampani ziyakube zinikela ngawo, niqukumbele kwaye nivale inkqubo ye-IPP endaweni yayo nimisele inkqubo eyakunika iinkampani zeziniki-mandla ezivuselelekayo (Renewable Energy) ezilawulwa luluntu ngendlela eyakhayo nenentsebenziswano neyakuthi iqhutywe phambili liBhunga elonyulwe ngabahlali bendawo eyakuthi ibe yinzuzo kuLuntu olo. Ezi nkampani zoluntu zizo eziyakunikela ngamandla ka gesi nako konke okungqamene noku, zilwe nemiceli-mngeni enxulumene nobuhlwempu zandise intsingiselo yelungelo kumandla.
Simemelela ukuba niqinisekise ukuba akukho mathuba emisebenzi aya kulahleka ngokuba kulandelwe inkqubo ye-IPP, futhi niqinisekise ukuthi amashishini kaRhulumente, nawaziwa nje ngeePara-statal, ayazibophelela ekudaleni amathuba emisebenzi, ikakhulu kuqoqosho lweziniki-mandla ezivuselelekayo (green economy). Oku kudinga ukuthi sisebenze ngeendlela ezohlukileyo kunezo ze-IPP.
Simemelela uRhulumente ukuba afake uxinzelelelo kwi NERSA ukuba ibuyekeze bonke abasebenzi abalinyazwe yimitha yeNyukliya (Radiation), abasebenze ngeeKhemikhali ezindaweni ezinobungozi kwaye abanike uncedo lwezempilo ngokungxamisekileyo, baxilongwe ekuhleni.
Silindele ukuba iimfuno zethu zithathelwe ingqalelo kwaye zibe yinxalenye yeziphakamiso kolu dliwano-ndlebe labucala olubizwa elika wonke-wonke(Energy Indaba) nakuzo zonke ezinye iindibano eziloluhlobo ezibizwe nguRhulemente, uEskom kwakunye ne NERSA.
Akukho namnye onokuqinisekisa ukuba izitishi ezicetywayo zeNyukliya zikhuselekile ngokupheleleyo. Abasebenzi abachikwe yimitha ye Nyukliya kwakunye neeKhemikhali ezinobungozi kwiziko lokuphanda nzulu ngeNyukliya e- Pelindaba basalwela imali yembuyekezo kwaye uninzi lwabo lude lwasweleka lubulawa ngumhlaza lusalindile. Ukuba asinakuqinisekisa ukhuseleko kunye nembuyekezo yabo babesebenza e Pelindaba , singakucinga njani ukufaka imali kwi Nyukliya?